तरकारीको बोटमा ‘लाखका नोट’ NewsButwaltoday
तरकारीको बोटमा ‘लाखका नोट’
खेतमा लटरम्म तरकारी फलाएका लोकेन्द्र रानालाई हिजोआज कमै फुर्सद छ । कोरोना महामारीको समयमा तरकारी बालीको गोडमेल गर्ने, तयार भएका तरकारी टिप्ने र बिक्री गर्ने कामले उनलाई फुर्सद नमिलेको हो ।
उनको खेतमा तोराय, काक्रा, फर्सी, घिरौला फलिरहेको देख्न सकिन्छ ।
भरत थापा पनि खेतमा लगाएको तरकारी खेतीमै ब्यस्त छन् । उनले पनि खेतमा तयार भएको करेला, फर्सी, टमाटर गाउँबाटै बिक्री गरिरहेका छन् । तरकारी फलेको देख्दा मन नै खुसी हुन्छ भरतले भने, ‘हामी किसानका लागी तरकारी फल्नु नै सबैभन्दा ठूलो कुरा हुँदो रहेछ ।’
तरकारी फल्नु नै हाम्रो मिहिनेत देखिनु हो उनले, ‘थपे आखिर तरकारी बेचेपछि त बल्ल हातमा पैसा आउने हो ।’
लोकेन्द्र र भरत मात्र होइन पाल्पाको तिनाउँ गाउँपालिका वडा नं. २ बोटे गाउँका किसानहरु अहिले तरकारी खेतीमै व्यवस्त छन् । तरकारीबाट राम्रो आम्दानी हुन थालेपछि उनिहरु तकारी खेतीतर्फ लागेका हुन् । कुलोबाट खेतमा ल्याएको सिस्ने खोलाको पानीले हिउँद बर्षा सिंचाई सुबिधा र उत्पादित तरकारीको बजारमा समस्या नभएपछि किसानको लगन खेरा जाने गरेको छैन् ।
उक्त गाउँका किसानहरु पैसाका लागि गाउँ छाड्नेहरुका लागि उदाहरण बनेका छन् । गाउँका अधिकांश किसानले बारीमा तरकारी फलाएका छन् । त्यही तरकारीको आम्दानीबाट घर व्यवहार चलाउने मात्रै होइन भैपरी आउदाका लागि राम्रो बचत पनि गर्ने गरेका छन् । हामीका लागी खेत नै बिदेश हो, यहिबाट पैसा फलिरहेको छ किसानको भनाई छ ।
गाउँमा उत्पादन भएको तरकारीका लागि बुटवल नजिक भएको हुँदा बजारको समस्या हुने गरेको छैन् । जति उत्पादन भएपनि बजार नजिक भएको हुँदा बिक्री भैहाल्छ भरतले भने, ‘अहिले त फेरि पैचो पसलको गाडी तरकारी लिनको लागी गाउँमै आउँछ । थोक मूल्यमा पैचो पसलले गाउँमै पुगेर किसानको उत्पादन किनिदिने हुँदा लकडाउनमा तरकारी बिक्री नभई खेर नगएको उनले बताए ।’ जति फलाएपनि पैचोले किनिदिन्छ उनले भने, ‘लकडाउनमा पनि तरकारी बजारको समस्या छैन् ।’
उत्पादन भएको तरकारी बिक्री हुँदा र गाउँमा खेतबारीमा काम गर्नमा समस्या नभएको हुँदा कोरोना महामारीको कारण भएको लकडाउनले आफुहरुलाई प्रत्यक्ष रुपमा असर नगरेको उनीहरुको भनाई छ । लोकेन्द्रले यो सिजनमा करिब ५ लाख ६५ हजारको तरकारी बिक्री गरिसकेको बताए । उनका अनुसार उनले टमाटर २ लाख ४० हजार, करेला १६ हजार, फर्सी ७५ हजार, काक्रा ४० हजार र तोराय ५० हजारको बिक्री गरिसकेका छन् । उनका खेतमा अहिले पनि तोराय, करेला, फर्सी लटरम्मै छ भने टमाटर सकिने अवस्थामा पुगेको छ । त्यसैगरी अर्का किसान भरत थापाले करिब ४ लाख १० हजारको तरकारी बिक्री गरिसकेका छन् । उनले टमाटर १ लाख, फर्सी १ लाख २० हजार, फर्सीको मुन्टा ३० हजार र करेला १ लाख ६० हजार बराबरको बिक्री गरेको बताए ।
गाउँपालिकाका अध्यक्ष ओमबहादुर घर्तीले उक्त गाउँका किसानको काम अरु गाउँका लागि पनि सिक्न योग्य भएको बताए । उहाँहरु रोजगारीका लागि गाउँ छाड्नेका लागि उदाहरणीय हुनुहुन्छ अध्यक्ष घर्तीले भने, ‘हामीले पालिकाका त्यस्ता किसानको संख्या बढाउन प्रोत्साहन गरिरहेका छौं ।’
उक्त गाउँमा ३ दर्जन बढी किसान व्यावशायीक तरकारी खेतीमा आबद्द रहेको गाउँपालिकाका प्रवक्ता एंव वडा नं. २ का वडाध्यक्ष राजेश श्रेष्ठ बताउँछन् । उनीहरुलाई तरकारी खेतीतर्फ प्रोत्साहित गर्नका लागि पालिकाले मल बीउ र प्रविधिमा सहयोग गरिरहेको उनले बताए । हामीले किसानका लागि प्रोत्साहनको काम शुरु गरेका छौं उनले भने, ‘आउने बर्ष थप किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने योजना छ ।’ तरकारी खेतीका लागि सिस्ने खोलाको पानीले हिउँद बर्षा सिंचाई सुविधा छ भने कुलोको मर्मतमा पालिकाले सघाउने गरेको छ ।
अपडेट : 2021-05-29 08:29:20
८० प्रतिशत अनुदानमा तिनाउका किसानलाई पाडापाडी
किसानलाई खेतीकै पीर
केशर दाइको आश कृषिमै सास